I-Athy ingelinye lamadolobha ayigugu e-Kildare futhi athuthukiswe aba yidolobha lezimakethe ngenxa yenethiwekhi yomfula kanye nemifula - kulapha uMfula iBarrow uhlangana negatsha lase-Athy leGrand Canal. I-Athy yaziwa umhlaba wonke ngokubamba iShackleton Autumn School ngenhloso yokuhlonipha umhloli wamazwe omkhulu, u-Ernest Shackleton, owazalelwa eKilkea eseduze futhi empeleni kuyikhaya lombukiso waphakade onikezelwe kumhloli wamazwe. Zitholele umlando wamaQuaker e-Kildare ngokuvakashela e-Ballitore nase-Burtown House & Gardens, noma uthathe uhambo ngomkhumbi ogudle uMfula ukuze ubone idolobha ngelinye iso. Hlola izindawo zamagugu zasendulo ezifafazwe kuyo yonke le ndawo njengeKilkea Castle neWhites Castle, eziqhamuka ezikhathini zamaNormans noFitzgeralds (the Earls of Kildare), kuyilapho abali-12th ikhulu le-Moate of Ardscull lidume kakhulu ngezinganekwane "zabantu abancane".
Izindawo zokudlela eziphuma phambili e-Athy
Izindaba Zokubekezela Nosizi
Thola okuningi ku-Athy